ओलीलाई कसले दियो धम्की ? सुरक्षा निकाय भन्छ- हावादारी हल्ला « Sudoor Aaja
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १८:००
ओलीलाई कसले दियो धम्की ? सुरक्षा निकाय भन्छ- हावादारी हल्ला
सुदूर आज १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १८:००
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूमाथि भौतिक आक्रमणको योजनाको खुलासा गरे ।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले विकासका कामहरू देखेर देशी-विदेशी तत्त्वबाट प्रहार खेपिरहेको बताए । कार्यक्रममा ओलीले भने, “अन्यथा नमान्नुहोला, ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, मेरो ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अन्यथा नमान्नुहोला । तर त्यस्तो हुँदैन । म रहिनँ भने पनि अन्यथा नमान्नुहोला, पार्टी छ, विचार छ ।”
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो भनाइ सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा संयन्त्र भने अचम्ममा परेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हावादारी भएको अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सुरक्षा अधिकारीहरु भन्छन्, “उहाँले किन बोल्नुभयो हामी अचम्मित छौं । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्तिबाट के प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको हो ? राजनीतिक फन्डका लागि मनलाग्दी बोल्ने कुरा सुहाएन ।”
सुरक्षा परिषद्‌का अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कोबाट आक्रमणको सम्भावना रहेको खुलाएनन् । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि खतरा रहेको बताइरहँदा उनीसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि थिए । सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको इतिहासमा हालसम्म कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखमाथि आक्रमण भएको छैन ।
सुरक्षा अधिकारीहरुले भने, “उहाँले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउन खोजेकोजस्तो देखियो । नेपालको अहिलेको अवस्था द्वन्द्वकालीन पनि होइन । कुनै हतियारबद्ध विद्रोही समूह पनि छैन । सुरक्षाकर्मीको घेरामा बस्ने अनि ज्यानमाथि खतरा छ भन्ने कुरा कहींबाट पनि मेल खाँदैन ।”
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी पूर्णचन्द्र जोशी प्रधानमन्त्रीले कहींबाट केही सूचना पाएर त्यस्तो बोलेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले कहींबाट सूचना पाएरै बोल्नुभएको होला । तर देशकै कार्यकारीमाथि आक्रमण भएको नेपालको इतिहासको मलाई सम्झना छैन ।”
काठमाडौं । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको ऐतिहासिक धरहरामा बुधबार गजुर राखिएको छ । नेपाली सेनाले विगुल फुकी, मंगल धुन र स्वस्तीक
मास्क प्रयोग गरेर यत्रतत्र फाल्ने बानी छ ? पर्नु होला सरकारको कारबाहीमा
काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ लहरसहित कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा कडाइ गर्न थालिएको छ । स्थानीय प्रशासनमार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड
बीबीसी । “आजका स्मार्टफोनको क्यामेराले बीस वर्ष अगाडि झन्डै ८ हजार डलर हालेर किनेको वास्तविक क्यामराभन्दा राम्रा तस्बिरहरु निकाल्छ,” अकल्यान्डस्थित